आज चैत २८ गते बिहिवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस आजको राशिफल
आज मिति २०७५ चैत महिनाको २८ गते बिहिवार सोहि अनुरुप सन् २०१९अप्रिल १ तारिख तपाइको दिन कसरी बित्ला त ? हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल !
नोकरी व्यवसायमा प्रतिस्पर्धाको समय रहेको छ। छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्नेछ। भाई बन्धुका साथमा आपसी सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ। स्त्री तथा बाणीमा बिशेष संयमित हुनुपर्ने छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्ने अवसर मिल्नेछ।
मन अस्थिर हुनालेक महत्वपुर्ण निर्णय लिन नसकिएला। नया कार्यको थालनी गर्नका लागि दिन उचित रहेको छैन। बोलीको नकारात्मक असर पर्न सक्छ बिशेष सजक रहनु पर्ने छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। बिद्यार्थीवर्गका लागि समय अनुकुल रहेको छ।
स्वादिष्ट भोजन तथा नयाँ बस्त्रको शुभ अवसर मिल्नेछ। साथीभाईको साथमा आनन्दमय दिन व्यतित हुनेछ। आर्थिक आयोजना गर्ने अनुकुल समय रहेको छ। अत्यधिक खर्च हुने सम्भावना रहेको छ सजक रहनु होला। मनमा नकारात्मक विचारले डेरा जमाउन सक्नेछ। समग्रमा यहाको आजको दिन शुभ रहने छ।
परिवारका साथमा अनावश्यक मनमुटाव हुनाले मानसिक बेचैनको अनुभव हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउने छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान हानी हुन सक्छ सजक रहनुहोला। आर्थिक क्षेत्रमा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने छ। मानसिक द्विविधा पैदा हुनेछ।
मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मान्यजनको आशिर्वाद मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। यात्राको समभावना रहेको छ। नोकरीमा पदोन्नति हुने छ। सोचे अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। समग्रमा तपाईको आजको दिन लाभदायी रहेको छ।
नया कार्यको थालनी गर्ने अनुकुल समय रहेको छ। पिताको तर्फबाट लाभ हुने देखिन्छ। नोकरी ,व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। धन एवम मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। सरकारी कार्य सफल भएर जानेछ। गृहस्थजीवनमा खुसियाली छाउने छ। कार्यको मामलामा बाहिरको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
बौद्धिक एवम रचनात्मक कार्यमा मन लाग्नेछ। नया कार्यको शुभारम्भ गर्ने अवसर मिल्नेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। विदेश यात्राको लागि पनि समय अनुकुल रहेको छ। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ। सन्तान सुख मिल्ने छैन।
बाणी तथा व्यवहारमा संयम रहनु आवश्यक रहेको छ। नया कार्यको थालनी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुने छ। स्वास्थ्यमा अचानक परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। अचानक धन लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। सक्छ। आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ।
मनोरन्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ। दाम्पत्यजीवनमा सुखमय रहने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। बौद्धिक कार्यमा सफलता हासिल हुनेछ। सहकर्मीको प्रसस्त सहयोग मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ।
व्यापार व्यवसायको वृद्धि विकास एवम आर्थिक योजना गर्नका लागि दिन अनुकुल रहेको छ। आर्थिक कारोबारका लागि उचित समय रहेको छ। पारिवारिक वातावारण हर्सोल्लासमय हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। मुद्धा मामलामा सामेल नहुदा मा नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहने छ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिनाका साथै मानसिक अशान्ति छाउने छ। सन्तानको बिषयमा केहि चिन्तित हुनु पर्नेछ। सोचेअनुरुप कार्यमा सफलता नमिल्नाले निराशा पैदा हुनेछ। आकस्मिक रुपमा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। साहित्य लेखनका लागि अनुकुल समय रहेको छ।
परिवारका सदस्यकाबीच आपसी मतभेदको समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्नेछ । अनावश्यक धन तथा मान हानी हुन सक्छ सजक रहनुहोला। नोकरी व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिदैन। भगवानको पुजा उपासना गर्नाले बिशेष लाभ हुने देखिन्छ।
प्रकाशित : बुधबार, चैत २७, २०७५१४:११
भोलि चैत २९ गते शुक्रवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल